(ဓါတ်ပုံ အညွှန်း – မွန်ပြည်နယ် အတွင်း စိတ်ကြွှ ဆေးပြားနှင့် ဘိန်းစာရွက်ကို အရည်ကျို၍ သောက်သုံးခြင်းကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုမှု ရှိနေ)
“ရှောင်လေ ဝေးဝေး မူးယစ်ဆေး” ဆိုပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ် ပညာပေးရေး အစီအစဉ်ရဲ့ နှိုးဆော်သံကို အမှတ်ရကောင်း အမှတ်ရ ကြဦးမှာပါ။
လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် အတွင်း မူးယစ် ဆေးဝါး ပျံ့နှံ့ နေမှု အခြေအနေက စိုးရိမ် စရာ အနေအထားကို ရောက်နေ တယ်လို့ မွန်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မွန်ပြည်သစ် ပါတီက ဆိုပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တွေ အကြားမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး စာရင်းထဲမှာ အကြုံးဝင်တဲ့ စိတ်ကြွဆေးပြားလို့ ခေါ်တဲ့ ယာဘနဲ့ ဘိန်းစာရွက် တွေကို အဓိက ထားပြီး သုံးစွဲ နေကြပါတယ်။
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲတဲ့ လူငယ်တွေကြောင့် သူတို့ဟာ အပျော် သဘောသုံးရာ ကနေ စွဲလန်းမိသွားပြီး နောက်ဆုံးမှာ ပညာရေး ကဏ္ဍလည်း ဆုံးရှံူး၊ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မိသားစု တွင်းမှာ ပြသနာတွေ တက်ပြီး လူမှု ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် သူတို့တွေဟာ ဘာမှကိို အကျိုး မပြုနိုင်တဲ့ လူငယ်တွေ ဖြစ်နေရပါတယ်။
ဒီလို မွန်ပြည်နယ် အတွင်းက လူငယ်တွေ အကြားမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲနေကြ တာတွေကို တားဆီးဖို့ တိုက်ဖျက်ဖို့၊ ပညာပေးဖို့ စတာတွေကို မွန်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မွန်ပြည်သစ် ပါတီက ဘာတွေ လုပ်ဆောင် နေတာ ရှိပါသလဲ။
ဟင်္သာ မီဒီယာက ဒီအကြောင်းတွေကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ ပြင်ပရေးရာ တာဝန်ခံ တစ်ဦးဖြစ်သလို ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ နိုင်အေးမွန်ကို အကျယ်တဝင့် မေးမြန်း ထားတာကို တင်ဆက် ပေးလိုက် ပါတယ်။
ဟင်္သာ မီဒီယာ (မေး) – ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မွန်ပြည်သစ်ပါတီက လက်ရှိ ဘာတွေ လုပ်ဆောင် နေသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင် ပြောပြ ပေးပါလား။
နိုင်အေးမွန် (ဖြေ) – မူယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ဆိုးကျိုး တွေကိုလည်း ပညာ ပေးတဲ့ အပိုင်း အနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျတော်တို့က လက်ကမ်း စာစောင် ထုတ်ပြီးပညာပေး နေတာ ရှိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးရင် အရေးယူ ခံရမယ် ဆိုတာ ကိုလည်း သိသွားမယ် လူထုနဲ့ လူငယ် တွေကို ကော်မတီ အဆင့်ဆင့် တွေက မူးယစ် ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀ုိင်းကူ ရှင်းပေး ပါတယ်မြို့နယ်၊ ခရိုင်တွေမှာလည်း ဆေးသုံးစွဲတဲ့ သူတွေကို ထိန်းသိမ်း ပေးနေတာ ရှိပါတယ်။ တချို့တွေ ဆေးသုံးပြီး အိမ်က မိဘမောင်နှမတွေ ထိန်းမနိုင် တော့တဲ့ အဆင့် ရောက်ရင် ပါတီမှာ လာအပ်တာ ရှိပါတယ်။ ပါတီရဲ့ ဗဟိုကော်မတီ ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် တွေကို အခြေခံ ပြီးတော့ လက်အောက်ခံ ခရိုင်တွေမှာ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်ပဲ မူးယစ် ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဖမ်းဆီးတာ၊ အရေး ယူတာ၊ ပညာပေးတာ၊ ထိန်းသိမ်းရေး စတာတွေ လုပ်နေတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူးယစ်ဆေးစွဲ နေတဲ့ သူတွေကိုအမြစ် ပြတ်အောင် ကုသဖို့န့ စနစ် တကျ ဆေးဝါးတွေ ကျွှေးပြီး ကုသပေးဖို့ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အစီအစဉ် ကိုတော့ လုပ်ဖူး တာမျိုး မရှိ သေးဘူး။
ဟင်္သာ မီဒီယာ (မေး) – ထပ်မံ ပြီးတော့ပေါ့ ၊ ဒီအစီအစဉ်ကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဖြစ်အောင် ဘာတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွားဖို့ လျာထား တာများ ရှိပါသလဲ။
နိုင်အေးမွန် (ဖြေ) – ဒီတစ်ခါတော့၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက် EBO က နေပြီး ပြန်လည် ထူထောင်ရေး စခန်း ဖွင့်ဖို့ အကူအညီ ပေးမယ်လို့ ပြောထားတယ်။ အဲတစ်နေရာ ကိုတော့ပါတီ ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင်တွေ အနေနဲ့ သုံးသပ် ထားတာတော့ မော်လမြိုင် ခရိုင်ကို ပေးဖို့ပေါ့။ မော်လမြိုင် ခရိုင်က တာဝန် ယူပြီးနေရာ ဆောက်ပေး ရမယ်။ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ မှုတွေ လုပ်ပေးရမယ်။ အဲဒီမှာ ဆိုရင်ဆေးစွဲ နေတဲ့ သူတွေကို နည်းစနစ် တကျနဲ့ သေသေချာချာ စောင့်ရှောက် ကုသ ပေးဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ်။ ဆေးမသုံး ရရင် မနေနိုင်တဲ့ အဆင့် အထိ စွဲနေတဲ့ လူတွေကို အမြစ်ပြတ်အောင် ကုသ ပေးနိုင်ဖို့ အဆင့် အထိ ရည်ရွယ် ထားပါတယ်။ နောက်တစ်နေရာ ကတော့ UNODC က နေပြီးတော့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဒီလိုမျိုး အကူအညီ လာပေးဖို့ ရှိတယ် ဆိုပြီး ကျနော်တို့နဲ့ စကား ပြောထားတော့ သူတို့လည်း ကူညီ ချင်နေတယ် ဆိုပြီး သူတို့ အကူအညီ ကိုတော့ ထားဝယ် ခရိုင် ဝယ်ဇင် စခန်းမှာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး စင်တာ ဖွင့်ဖို့ ကနဦး သဘောတူ ထားကြပါတယ်။ EBO အစီ အစဉ် ကတော့ သေချာ ပါပြီ။ ညှိနှိုင်းလည်း ညှိနှိုင်း ထားပြီး ပါပြီ။ လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေလည်း ရထား ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ် ဆိုရင် အရင် ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကို မူးယစ်ဆေးဝါး ပညာပေး၊ တိုက်ဖျက် တားဆီးမှုတွေ လုပ်နေရာ ကနေပြီးတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တိုက်ဖျက် သွားဖို့ စတင် လုပ်ဆောင် သွားဖို့ စီစဉ် နေပါတယ်။
ဟင်္သာ မီဒီယာ (မေး) – မွန်လူထုတွေ အကြားမှာ မူယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်က မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ထိန်းချုပ်တဲ့ ဒေသ တွေမှာ ဘယ်လောက် အထိ ပြန့်နှံ့ နေတာမျိုး ရှိပြီးတော့ ဘယ်လောက် အထိ စိုးရိမ် စရာ အနေအထား ရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာရော ဘယ်လို သုံးသပ် ထားပါသလဲ။
နိုင်အေးမွန် (ဖြေ) – ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ သထုံ၊ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ် စတဲ့ မော်လမြိုင် ခရိုင် ထိန်းချုပ် ဒေသမှာ ပိုပျံ့နှံ့ နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မူးယစ် ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှု တွေနဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိနေ ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ရဟန်းရှင်တွေ ပြည်သူ လူထုတွေ အကုန် သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လာဘ်တွေ လာဘ်ယူမှုတွေ ရှိနေ တာကြောင့် အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ မျက်စိမှိတ်ထားသလို ဖြစ်နေ တာပေါ့နော်။ ပြောရမယ် ဆိုရင် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးတွေ အများစု ကမြင်းဆေးတွေ သုံးနေ ကြတာ များပါတယ်။မသုံးတဲ့ သူတွေတော့ ရှိတော့ ရှိပါတယ်။ ယောကျာင်္းလေးတွေ အများစု သုံးကြပါတယ်။ တချို့ လူငယ်တွေ သုံးပါ များတော့ရှော့ဖြစ် သွားတယ်။ တချို့တွေကအိမ်မပြန်ဘူးဆိုင်ကယ်တွေ ပေါင်တယ်။ နောက်ဆုံးလုယက်၊ ခိုးဆိုးတဲ့ အထိပါပဲ။
နောက်ဆုံး မှာတော့ဗဟိုကော်မတီမှာမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးကိုင်တွယ် နိုင်ဖို့ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် တွေကို အပ်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ဖို့ တာဝန် ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင် တွေက ကိုင်တွယ်ဖို့ မူးယစ် ဆေးဝါး နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေ၊ နည်းဥပဒေတွေ စနစ် တကျ ရေးဆွဲပြီး ဗဟိုကော်မီတီ အတည် ပြုချက် ပြန်ယူပြီး အခု လုပ်ဆောင် နေပါတယ်။ စိတ်ကြွှဆေး သုံးရင် ဘယ်လို အရေးယူ မလဲ၊ ဘယ်လောက် သုံးရင် ဘယ်လောက် အပစ် ချမှတ် မလဲ။ ပြီးတော့ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရင်အပြစ်ဒဏ်ဘယ်လောက်လဲဥပမာဘိန်းပင်ကိုးကင်း၊ ဘိန်းစာရွက် ထုတ်လုပ် ရောင်းချ စိုက်ပျိုးသူတွေကို ဘယ်လောက်အထိ အပြစ်ဒဏ်ခံရမ စတာ တွေကို အစ နည်းဥပဒေတွေ အသေးစိတ် ဆွဲပြီးတော့ ကိုယ်တွယ် သွားပါ့မယ်။
ဟင်္သာ မီဒီယာ (မေး) – အကယ်၍ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ဆောင် နေတဲ့ မွန်ပြည်သစ် ပါတီက အရာရှိတွေ ကိုယ်တိုင် ကရော ၊ ဒီကိုင်တွယ်မှု မှာ မမှန် မကန် လုပ်တာတွေ၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုတွေ လုပ်လာမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်လာရင် ဘယ်လို အရေးယူမှု ရှိမလဲ ? ဥပဒေ မှာရော ဒါကို ထည့်သွင်း ရေးသား ထားတာ ရှိပါသလား။
နိုင်အေးမွန် (ဖြေ) – ဥပေဒမှာ ထည့်သွင်း ရေးဆွဲ ထားတာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲတဲ့ သူရောဖမ်းမိရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်တဲ့ သူတွေကို ဖမ်းဆီး အရေးယူတဲ့ အဖွဲ့တွေက နေပြီး လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ပြီးတော့ ဖမ်းမိတဲ့ ဆေးအလုံးရေ လျှော့ချ တင်ပြ တာတို့၊ အဲဒီ လူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး မသမာတဲ့ ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင် မှုတွေ လုပ်တယ် ဆိုရင် ဘယ်လို အရေးယူ သွားမလဲ ဆိုတာ ဥပဒေ ထဲမှာ အတိအလင်း ရေးဆွဲ ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကို မိမိမှာ ရှိရဲ့ အခွင့် အာဏာကို အသုံး ပြုပြီး မူးယစ် ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား သယ်ဆောင်တာ တွေ လုပ်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လို အရေးယူ မလဲ ဆိုတာလည်း ရေးဆွဲ ထားတာ ရှိပါတယ်။
ဟင်္သာ မီဒီယာ (မေး) – ဖမ်းဆီး ရမိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တွေကိုဘယ်လို လုပ်ဆောင် သလဲ ဆိုတာလည်း သိပါရစေ။
နိုင်အေးမွန် (ဖြေ) – အကယ်၍ မူးယစ် တရားခံဟာ မြန်မာ အာဏာပိုင်က အလိုရှိနေတဲ့ တရားခံ ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် လူရော ဖမ်းဆီး ရမိတဲ့ မူးယစ် ဆေးဝါးရော ကျနော်တို့ မြန်မာ အာဏာပိုင် ဆီကို အပ်နှံတာမျိုး ရှိပါတယ်။ အလားတူပဲ နယ်စပ်မှာဖမ်းဆီးရမိပြီး တရားခံဟာ ထိုင်းအစိုးရက အလိုရှိသူ ဖြစ်နေရင် ကျနော်တို့ ဆေးရော လူရော ထိုင်းအာဏာပိုင် တွေကို အပ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ဆိုရင် ထားဝယ် ခရိုင်၊ မော်လမြိုင် ခရိုင်၊ သထုံ ခရိုင်မှာ ဆိုရင်ပြည်သူတွေရှေ့မှာ ရှင်းတမ်း လုပ်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေ ရှိပါတယ်။
ဟင်္သာ မီဒီယာ (မေး) – အစောက ပြောတော့ မူးယစ် ဆေးဝါး တွေကို ဖမ်းဆီး အရေးယူတဲ့ နေရာမှာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်စပ် နေတယ် ဆိုတော့ အရေးယူမှု အပိုင်းမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ တွေ့ရလဲ ဆိုတာလည်း ရှင်းပြ ပေးပါလား။
နိုင်အေးမွန် (ဖြေ) – မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီး နှိမ်နှင်းနဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ ဆီကို ရဟန်းရှင်ပြည်သူ တွေကဘယ်လို အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားရမလဲ ဆိုတာကို လာတိုင်ပင်တာ ရှိပါတယ်။သူတို့ တွေကလည်း သိပါတယ်။ ဖမ်းရ ခက်တယ် ဆိုတာကို သူတို့တွေကနားလည်ပါတယ်ဖမ်းလည်း ကုန်မသွား နိုင်ဘူး။ သယ်ဆောင်တဲ့ သူတွေလည်း အများစုက သူတို့တွေမှာလက်နက် ရှိတယ်။ ဆိုတော့ဒီပြဿနာကို ပါတီကကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း သော်လည်းမပြတ်သွားဘူး။ အကုန် အစင် ဖမ်းလို့ ရမဘူး အဲလို ဖြစ်နေတယ်။
ဟင်္သာ မီဒီယာ (မေး) – နောက်ဆုံး အနေနဲ့ပေါ့ အရင်က ပြည်လည် ထူထောင်ရေး စခန်းတွေ ဆောက်ပြီး ကုသ ပေးတာ မရှိဘူး၊ အခု ဒါတွေကို လုပ်ဆောင် တော့မယ် ဆိုတော့ ဘယ်လို အကျိုးအမြတ် ရှိမလဲ ? မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး ထိန်းချုပ်ရေး အတွက် ဘယ်လောက် ထိရောက်မှု ရှိနိုင်မလဲ ဆိုတာ ပြောကြား ပေးပါလား။
နိုင်အေးမွန် (ဖြေ) – မူးယစ်ဆေးဝါး စွဲနေတဲ့ သူတွေကို စနစ် တကျ ပြန်လည် ပြုစု ပျိုးထောင် ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘာမြင်လဲ ဆိုတော့ ကျတော်တို့မကုသ ပေးဘူးပစ်ထားမယ် ဆိုရင်ကျတော်တို့ ပြည်သူတွေလူမျိုးတွေမွန်ပြည်သစ် ပါတီကဝုုိင်းပြီး တာဝန်ယူထားပေးတဲ့ ဒေသတွေမှာပေါ့နော် အခြား တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ပါတာ ပေါ့နော်။ ရေရှည်မှာ ဒီလူတွေဘဝတွေ ပျက်မယ်ဦးနှောက်တွေ ကြောင်လာမယ်သုံးစားလို့ မရတဲ့အနေအထား အထိ ဖြစ်မယ်။ နောက်ပြီးကျောင်းနေအရွယ် ကလေးတွေ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုကြောင့် ရည်မှန်းချက်တွေ ပျောက်လာ နိုင်တယ်။ ပညာတွေမပြည့်စုံ တော့ဘူး။ ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ ကျတော်တို့ မြင်တာကပြုစု စောင့်ရှောက်ပညာပေးနိုင်တယ်တဖက်လည်းဖမ်းဆီး အရေးယူတာ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုရင်ပြည်သူတွေ ကောင်းကျိူး ရလာ နိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ဒီမူးယစ်ဆေး လျှော့နည်း သွားဖို့နဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် ပပျောက် သွားတဲ့ အဆင့် အထိ ရောက်အောင် တဖြည်းဖြည်း လုပ်ဆောင် သွားနိုင်မှာပါ။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ မူးယစ် ဆေးဝါး တားဆီး၊ နှိမ်နှင်း၊ ပညာပေးရေး ဆိုင်ရာ များနှင့် ပတ်သက်၍ ဟင်္သာ မီဒီယာမှ မေးမြန်း ထားသည်ကို တင်ဆက် ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခင်ဆောင်းပါးရေမွန် မက်ဆေးဆေး ဆုရ ပထမဆုံး ကချင် အမျိုးသမီး လဖိုင်ဆိုင်းရော်နှင့် မေးမြန်းချက်
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးကျိုက်ထီးရိုးတွင် Cable Car ၄၇ စီးပြေးဆွဲမည်